“Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao.”—APOK. 4:11.
HIRA: 12, 150
Nahoana i Jehovah no mendrika hitondra an’izao rehetra izao?
Inona no porofo fa ny fitondran’i Jehovah no tsara indrindra?
Ahoana no ampisehoantsika fa manohana ny fitondran’i Jehovah isika dieny izao?
1, 2. Mila resy lahatra ny amin’inona isika tsirairay? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
NIANARANTSIKA tao amin’ilay lahatsoratra teo aloha fa nilaza ny Devoly hoe tsy mendrika hitondra ny olombelona i Jehovah. Ho sambatra kokoa, hono, izy ireo raha izy ireo ihany no mitondra ny fiainany. Marina ve izany? Eritrereto hoe afaka miaina mandrakizay ny olona. Ho sambatra kokoa ve izy ireo raha manao izay tiany fotsiny, fa tsy manaiky an’i Jehovah ho mpitondra? Ho sambatra kokoa ve ianao raha miaina mandrakizay, ary ianao ihany no mitondra ny fiainanao?
2 Tsy misy olon-kafa afaka mamaly an’ireo fanontaniana ireo ho anao. Samy mila misaintsaina sy mitady ny valiny isika tsirairay. Ho hitantsika amin’izay hoe mendrika ny hitondra i Jehovah. Ho hitantsika koa fa ny fitondrany no tsara indrindra, ary tokony hanohana an’izany tanteraka isika. Manampy antsika ho resy lahatra ny amin’izany ny Baiboly. Hodinihintsika àry izao ny porofo manamarina fa tena manana zo hitondra an’izao rehetra izao i Jehovah.
MANANA ZO HITONDRA I JEHOVAH
3. Nahoana no i Jehovah ihany no manana zo hitondra?
3 I Jehovah no mendrika hitondra an’izao rehetra izao, satria Andriamanitra Mahery Indrindra izy ary izy no Mpamorona. (1 Tan. 29:11; Asa. 4:24) Miaiky an’izany ireo 144 000 hiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra. Hoy izy ireo ao amin’ilay fahitana ao amin’ny Apokalypsy 4:11: “Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao, ary noho ny sitraponao no nampisy sy namoronana azy ireny.” Tena manana zo hitondra ny olona sy ny anjely àry i Jehovah, satria izy no namorona an’izao rehetra izao.
4. Na afaka misafidy izay tiantsika hatao aza isika, nahoana isika no tsy manan-jo hikomy amin’i Jehovah?
4 I Satana kosa tsy namorona na inona na inona. Tsy manan-jo hitondra an’izao rehetra izao àry izy. Nanambony tena izy sy ilay mpivady voalohany, rehefa nikomy tamin’ny fitondran’i Jehovah. (Jer. 10:23) Marina fa navelan’i Jehovah hanana safidy izy telo. Tsy midika anefa izany hoe afaka nikomy taminy izy ireo. Tsy izany mantsy no tokony hampiasana an’ilay safidy nomen’i Jehovah. Afaka misafidy izay tiany hatao ny olona, kanefa tsy manome alalana azy ireo hikomy amin’Andriamanitra izany. Izy mantsy no namorona sy nanome aina azy ireo. Tsy mampiasa tsara ny safidy omena azy àry izay misafidy ny hikomy amin’i Jehovah. Mila ny fitondrany isika olombelona.
5. Nahoana isika no afaka matoky fa manao ny rariny foana i Jehovah rehefa manapa-kevitra?
5 Manan-jo hitondra an’izao rehetra izao koa i Jehovah satria manao ny rariny foana izy rehefa mampihatra ny fahefany. Hoy izy: “Izaho no Jehovah, dia Ilay maneho hatsaram-panahy feno fitiavana, sy manao ny rariny sy ny hitsiny eny ambonin’ny tany, satria toetra tena mahafinaritra ahy ireo.” (Jer. 9:24) Tsy mila lalàna nataon’ny olombelona tsy lavorary izy, mba hamaritana ny atao hoe rariny sy hitsiny. Izy mihitsy no efa manao ny rariny, ary tsy misy hokianina ny fanaovany an’izany. Nataony mifanaraka amin’izany ny lalàna nomeny ny olombelona. ‘Ny rariny sy ny hitsiny no fototra iorenan’ny seza fiandrianany.’ Afaka matoky àry isika fa mifanaraka amin’ny rariny daholo ny lalàna sy toro lalana omeny, ary ny fanapahan-kevitra raisiny. (Sal. 89:14; 119:128) I Satana kosa tsy mahavita mampanjaka ny rariny eto amin’ity tontolo ity, nefa manakiana ny fitondran’i Jehovah.
6. Milazà antony iray mahatonga an’i Jehovah hanana zo hitondra an’izao rehetra izao.
6 Manan-jo hitondra koa i Jehovah, satria manam-pahendrena sy fahalalana. Hainy tsara hoe ahoana no hikarakarana an’izao rehetra izao. Nataony nahavita nanasitrana aretina tsy sitran’ny dokotera, ohatra, ny Zanany. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Tsy fahagagana izany tamin’i Jehovah. Fantany tsara mantsy ny vatan’olombelona, ary hainy hoe ahoana no hanasitranana an’izay rehetra tsy metimety ao amin’izy io. Vitany koa ny manangana ny maty, sy misakana ny rivo-doza sy ny loza hafa mitovy amin’izany.
7. Inona no porofo fa tsy misy manam-pahendrena hoatran’i Jehovah?
7 Tsy misy fandriampahalemana mihitsy eto amin’ny tontolon’i Satana. Sasatry ny mitady vahaolana handaminana ny tsy fifanarahana ao amin’ny taniny, ohatra, ny firenena sasany. Maro koa ny firenena tsy mety mifanaraka. Mahavita mampisy fandriampahalemana eran-tany anefa i Jehovah, ary izy ihany no mahavita an’izany. (Isaia 2:3, 4; 54:13) Tena mitovy hevitra amin’ny apostoly Paoly àry isika. Hoy izy: “Lalina tokoa ny harenan’Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany! Tsy takatry ny saina tokoa ny fitsarany ary tsy hay fantarina ny lalany!”—Rom. 11:33.
NY FITONDRAN’I JEHOVAH NO TSARA INDRINDRA
8. Inona no tena manohina ny fonao rehefa mieritreritra ny fomba itondran’i Jehovah ny vahoakany ianao?
8 Tsy milaza fotsiny ny Baiboly hoe manana zo hitondra i Jehovah. Voalaza ao koa ny antony mahatonga ny fitondrany ho tsara noho ny fitondrana hafa rehetra. Anisan’izany ny hoe mpitondra be fitiavana izy. Tena manohina ny fontsika ny mieritreritra ny fomba itondrany ny vahoakany. “Mamindra fo sy tsara fanahy” izy, “tsy mora tezitra, be hatsaram-panahy feno fitiavana sady tena tia fahamarinana.” (Eks. 34:6) Sarobidy aminy ny mpanompony sady hajainy. Mikarakara tsara antsika izy, ary na isika aza tsy hahavita ny vitany amintsika. Tsy marina ny tenin’ny Devoly hoe misy zavatra tsara tsy omen’i Jehovah ny mpanompony tsy mivadika. Izy aza nahafoy ny Zanany malalany mba hahafahantsika hiaina mandrakizay.—Vakio ny Salamo 84:11; Romanina 8:32.
9. Inona no porofo fa mikarakara ny olona tsirairay koa i Jehovah?
9 Tsy ny vahoakany amin’ny fitambarany fotsiny no karakarain’i Jehovah. Tena mitady izay hahasoa ny tsirairay koa izy. Nanendry mpitsara mba hanafaka ny Israelita tamin’ny fahavalony, ohatra, izy nandritra ny 300 taona teo ho eo. Nanampy olona tsirairay koa anefa izy tao anatin’izany fotoana izany, anisan’izany i Rota. Tsy Israelita izy io nefa nahafoy zavatra be dia be mba hanompoana an’i Jehovah. Namaly soa azy àry i Jehovah, ka nomeny vady sy zanaka lahy izy. Tsy izay ihany fa lasa anisan’ny razamben’ny Mesia ilay zanany. Nasain’i Jehovah nosoratana ao amin’ny Baiboly koa ny tantaran’i Rota, ary nampitondraina ny anarany ilay boky. Azo antoka fa ho faly be izy rehefa hatsangana amin’ny maty ka hahafantatra an’izany rehetra izany.—Rota 4:13; Mat. 1:5, 16.
10. Inona no porofo fa tsy mampijaly ny vahoakany i Jehovah?
10 Tsy mampijaly ny vahoakany i Jehovah, ary tsy manao didy jadona. Lasa manana fahafahana sy mahatsiaro ho faly izay manaiky ny fahefany. (2 Kor. 3:17) Izao no nolazain’i Davida momba an’i Jehovah: “Haja amam-boninahitra no eo anatrehany, ary hery sy fifaliana no ao amin’ny fonenany.” (1 Tan. 16:7, 27) Hoy koa i Etana mpanao salamo: “Sambatra izay olona manao horakora-pifaliana. Handeha amin’ny fahazavan’ny tavanao foana izy ireo, Jehovah ô! Ny anaranao no ifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany.”—Sal. 89:15, 16.
11. Inona no azontsika atao mba ho resy lahatra kokoa isika hoe ny fitondran’i Jehovah no tsara indrindra?
11 Ilaina ny misaintsaina matetika momba ny hatsaram-panahin’i Jehovah. Ho resy lahatra kokoa isika amin’izay hoe ny fitondrany no tsara indrindra. Hitovy hevitra amin’ny mpanao salamo koa isika. Hoy izy tamin’i Jehovah: “Ny indray andro eo an-tokotaninao dia tsara noho ny arivo any an-toeran-kafa.” (Sal. 84:10) I Jehovah no namorona antsika, ka fantany tsara izay ilaintsika mba hahatonga antsika ho tena sambatra. Mihoatra noho izay ilaintsika aza no omeny. Mahasoa antsika izay rehetra asainy ataontsika. Ho sambatra foana isika raha mankatò an’i Jehovah, na dia misy zavatra tsy maintsy afointsika aza amin’izany.—Vakio ny Isaia 48:17.
12. Inona no tena mahatonga antsika hanaiky fa i Jehovah no manana zo hitondra?
12 Milaza ny Baiboly fa rehefa tapitra ny Fanjakana Arivo Taonan’i Kristy, dia hisy olona hikomy amin’ny fitondran’i Jehovah. (Apok. 20:7, 8) Inona no mety hahatonga azy ireo hanao an’izany? Hafahana ny Devoly ka hanao izay ho afany mba hamitahana ny olombelona. Mora tia tena ny olona ka izay no hohararaotiny, toy ny efa fanaony hatramin’izay. Mety horeseny lahatra izy ireo hoe tsy voatery hankatò an’i Jehovah vao ho afaka hiaina mandrakizay, fa misy zavatra hafa azo atao. Tsy hitombina mihitsy anefa izany. Tokony hieritreritra àry isika hoe: ‘Hino an’izany ve aho?’ Haharikoriko antsika izany laingan’ny Devoly izany, raha tena tia an’i Jehovah isika ary manaiky hoe tsara fanahy sy be fitiavana izy sady manana zo hitondra an’izao rehetra izao. Ny fitondran’i Jehovah ihany no ho tiantsika sy hekentsika.
TOHANO FOANA NY FITONDRAN’I JEHOVAH
13. Ahoana no ampisehoantsika hoe manohana ny fitondran’i Jehovah isika?
13 Hitantsika teo fa i Jehovah no manana zo hitondra, ary izy no mpitondra mahay indrindra. Rariny àry raha tohanantsika amin’ny fo manontolo ny fitondrany. Manao an’izany isika raha tsy mivadika aminy fa manompo azy foana. Asehontsika koa hoe tena tiantsika ny fitondrany raha miezaka araka izay azo atao isika mba hanahaka azy.—Vakio ny Efesianina 5:1, 2.
14. Inona no hataon’ny anti-panahy sy ny loham-pianakaviana raha manahaka an’i Jehovah izy ireo?
14 Ianarantsika ao amin’ny Baiboly fa be fitiavana foana i Jehovah rehefa mampihatra ny fahefany. Hanahaka azy àry ny loham-pianakaviana sy ny anti-panahy, raha tian’izy ireo ny fitondrany. Tsy hanjakazaka izy ireo ka ho lasa toy ny hoe mpitondra ao amin’ny fanjakana kely anankiray. Niezaka nanahaka an’Andriamanitra sy ny Zanany, ohatra, i Paoly. (1 Kor. 11:1) Ahoana no nataony rehefa nisy zavatra hitany hoe tokony hataon’ny mpiara-manompo? Notereny hanao an’ilay izy ve izy ireo? Sa nataony izay hahamenatra azy ireo, amin’izay izy ireo manao an’ilay izy? Tsia. Niangavy azy ireo izy. (Rom. 12:1; Efes. 4:1; Filem. 8-10) Hoatr’izany mantsy no fanaon’i Jehovah. Tokony ho be fitiavana hoatr’izany koa àry izay rehetra manohana ny fitondrany.
15. Ahoana no ampisehoantsika fa tena tiantsika ny fitondran’i Jehovah?
15 Hanaja sy hankatò an’ireo omen’i Jehovah fahefana koa isika, raha manohana ny zony hitondra. Ahoana anefa raha tsy ekentsika ny fanapahan-kevitra raisin’izy ireny, na tsy azontsika tsara ny anton’ilay izy? Tohanantsika foana ilay izy satria izay no fandaharan’i Jehovah. Marina fa tsy manao an’ izany ny olona eto amin’ity tontolo ity. Izany anefa no ataon’ny olona manaiky ny fahefan’i Jehovah. (Efes. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Handray soa isika raha manao an’izany, satria izay hahasoa antsika foana no tadiavin’i Jehovah.
16. Raha ekentsika fa i Jehovah no manana zo hitondra, ahoana no hataontsika rehefa hanapa-kevitra?
16 Asehontsika amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika koa hoe manohana ny fitondran’i Jehovah isika. Tsy manome lalàna voafaritra tsara momba ny zava-drehetra mantsy izy. Ampahafantariny antsika kosa izay eritreretiny mba hahalalantsika izay tokony hatao. Tsy omeny lisitra momba ny akanjo azo anaovana sy tsy azo anaovana, ohatra, isika. Lazainy amintsika anefa hoe tiany ho maotina ny akanjontsika sy ny paozintsika, ary tokony hifanentana amin’ny olona milaza ho Kristianina. (1 Tim. 2:9, 10) Tiany koa raha mieritreritra tsara isika rehefa hanapa-kevitra, amin’izay tsy manafintohina olona. (1 Kor. 10:31-33) Tia sady manohana ny fitondrany àry isika raha izay eritreretiny no tena mibaiko antsika eo amin’ny fiainantsika, fa tsy izay tiantsika fotsiny.
Asehoy hoe manohana ny zon’i Jehovah hitondra foana ianao (Fehintsoratra 16-18)
17, 18. Ahoana no azon’ny mpivady ampisehoana fa manohana ny fitondran’i Jehovah izy ireo?
17 Ary ahoana no azon’ny mpivady ampisehoana fa manohana ny fitondran’i Jehovah izy ireo? Tsy hoatran’ny noeritreretin’izy ireo angamba ny tokantranony, na mety hanana olana lehibe izy ireo. Inona no azony atao? Afaka mieritreritra ny fifandraisan’i Jehovah sy ny firenen’Israely izy ireo. Nilaza i Jehovah fa toy ny vadiny io firenena io. (Isaia 54:5; 62:4) Namadika azy imbetsaka izy io, ka toy ny hoe nijaly am-panambadiana i Jehovah. Tsy maimaika hisaraka anefa izy. Imbetsaka izy no namindra fo tamin’io firenena io, ary tsy nivadika tamin’ny fifanekena nataony taminy. (Vakio ny Salamo 106:43-45.) Tena tia azy foana i Jehovah. Tsy mahatonga anao ho tia an’i Jehovah koa ve izany?
18 Raha tia an’i Jehovah àry ny mpivady, dia hanahaka azy. Tsy hieritreritra ny hisaraka noho ny antony tsy araka ny Soratra Masina izy ireo, na dia manana olana aza. Fantany mantsy fa toy ny hoe nampiraisin’Andriamanitra zioga izy ireo, ka tiany hiaraka foana. Raha ny Baiboly koa no jerena, dia tsy afaka misaraka izy ireo raha tsy hoe nijangajanga angaha ny anankiray. Amin’izay ilay tsy manan-tsiny vao afaka manambady olon-kafa. (Mat. 19:5, 6, 9) Manohana ny zon’i Jehovah hitondra àry izy ireo, raha miezaka araka izay azony atao mba hifankatia sy hifanaraka tsara.
19. Inona no tokony hataontsika rehefa manao fahadisoana isika?
19 Tsy lavorary isika rehetra, ka tsy maintsy hanao zavatra mampalahelo an’i Jehovah indraindray. Fantany izany, nefa tena tia antsika izy ka nanome an’i Kristy mba ho vidim-panavotana. Rehefa manao fahadisoana àry isika, dia mila mangataka famelana amin’i Jehovah. (1 Jaona 2:1, 2) Tokony hiezaka handray lesona avy amin’ny fahadisoana nataontsika isika, fa tsy hanamelo-tena foana. Hamela ny helotsika i Jehovah ary hanampy antsika tsy ho kivy be, raha mifandray akaiky aminy foana isika. Hampiany koa isika rehefa sendra manana olana hoatr’izany indray.—Sal. 103:3.
20. Nahoana isika no tokony hanohana ny fitondran’i Jehovah dieny izao?
20 Ho eo ambany fitondran’i Jehovah daholo ny olona ao amin’ny tontolo vaovao, ary hianatra momba azy sy ny toetrany. (Isaia 11:9) Dieny izao anefa dia efa be dia be ny zavatra ianarantsika momba an’i Jehovah. Kely sisa dia ho voaporofo tanteraka fa i Jehovah no manana zo hitondra. Aoka àry isika hiezaka ny tsy hivadika fa hanompo azy foana ary hanahaka azy. Asehontsika amin’izany hoe manohana ny fitondrany isika.